To be or not to be.. | Zizawa's refuge
ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး အမေရိကားမှာ USMLE သွားဖြေကြ။ အင်္ဂလန်မှာ PLAB အရင်က လာဖြေကြ။ အခုနောက်ပိုင်း သြစတြေးလျမှာ AMC သွားဖြေကြပါတယ်။ ဒါက ကုသရေးပိုင်းပါ။
ဒါတွေမလုပ်ချင်တဲ့၊ လုပ်ဖို့အခွင့်မသာတဲ့လူတွေက အစိုးရအလုပ်ဝင်လုပ်ကြပါတယ်။ ဆေးကျောင်း၎ကျောင်းကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာဝန်တွေကို အစိုးရက အခုနောက်ပိုင်း အကုန်မခန့်တော့ပါဘူး။ အလုပ်မရတဲ့ဆရာဝန်တွေ ဘယ်လောက်ရှိတယ်။ ဘာလုပ်ကြသလဲ ဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်လို့ရရင် ကောင်းပါမယ်။
ဒီတော့ ကလေးတွေ၊ မိဘတွေ ဆရာဝန်ဖြစ်ရေး ဒို့အရေးဆိုတဲ့ အတွေးတဖြည်းဖြည်းဖျောက်ပြီး ကလေးတွေ ဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာကို မိဘက ၈တန်းလောက်ထဲက စောင့်ကြည့်၊ သိအောင်လဲ စာတွေပေးဖတ်ခိုင်း၊ အတွေ့အကြုံရအောင်ကူညီကြပြီး ကလေးဘာလုပ်ချင်သလဲဆိုတာ သိအောင် လုပ်သင့်ပါပြီ။ ၆နှစ်တာလျှောက်ရမယ့်ခရီးကို အစလောက်တင်မဟုတ်ဘဲ ပန်းတိုင်ရဲ့ ဟိုဘက်ကိုပါ မျှော်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
«7July 1962
16 thoughts on “To be or not to be..”
မြန်မာပြည်ကဘွဲ့ရပြီးရင် အနဲဆုံးတော့ 2-3 years အနောက်နိုင်ငံ experience ယူဖို့လိုမယ် ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ထွက်ပြီးရင် မပြန်ကြတာတော့ many reasons ကြောင့်ပေါ့လေ။ အပြစ်တော့မပြောသာပါဘူး။
Posted by steve | 10/07/2009, 06:51
မီးချစ် အသိ ဆရာဝန် ဆို ဆမ ရပြီးမှ စကာင်္ပူ မှာ
account နဲ့ လာလုပ်နေတယ် ..
Posted by မီးမီးချစ် | 10/07/2009, 07:28
ဒီမှာ ကျောင်းလာတက်ပြီး A level လုပ်နေတဲ့ ကလေးတွေလည်း ဆေးကျောင်း တက်ချင်ကြလို့ မေးမြန်းနေကြတယ် ကြားတယ်။ ကိုယ်လည်းပဲ သမားရိုးကျ စဉ်းစားပုံနဲ့ပဲ ဆေးကျောင်းတက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီအချိန်က ရွေးချယ်စရာ သို့မဟုတ် ပြင်ပအမြင်ကလည်း သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သွားလို့ တော်သေး။
ဆရာဝန်အလုပ်ဟာ ကျော်ကြားမှု၊ ၀င်ငွေ၊ အဆင့်အတန်း စတာတွေကို အဓိက ရဖို့ လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဖက်က (ကိုယ့်မိသားစုရောပါ) ရင်းရတဲ့ အချိန်၊ ခွန်အား၊ စိတ်ဓာတ်တွေ များလှပါတယ်။ ၀ါသနာ မပါရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရမယ့်အစား အင်မတန် စိတ်ဆင်းရဲရတတ်ပါတယ်။ တိုးတက်သင့်သလောက်လည်း မတိုးတက်ဘူး၊ အကျိုး မရှိဘူးပေါ့။
ဆရာဝန်လုပ်ချင်တဲ့ ကလေးတွေကို ဆယ်တန်းအပြီးမှာ work attchment/ internship ဆင်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်။ ကောင်းတာရော ဆိုးတာရော အရှိအတိုင်း မြင်နိုင်ခွင့် ရမယ့် နေရာမျိုးမှာပေါ့။ အနာဂတ်ကို ထိုးထွင်းမြင်နိုင်ကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် သိသင့်တာတွေ သိရပြီးမှ ချတဲ့ informed decision/ choice တော့ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါနဲ့ တွဲလို့ alternative options ပေးနိုင်မှု ရှိ/ မရှိကိုလည်း ထည့်စဉ်းစား စီစဉ်ပေးနိုင်ဖို့ လိုတယ်။ ပြည်တွင်း အခြေအနေမှာ ဒါဟာ ဘယ်လောက် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မပြောတတ်ဘူး။
ဒါတွေ လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ စိတ်မပါပဲ ရွေးစရာ မရှိလို့ ဆေးကျောင်းတက်ပြီး မတတ်တတတ်နဲ့ ဆရာဝန် ဖြစ်လာရတာတွေ၊ ကျောင်းတက်ရင်း အပြေးအလွှား ရုပ်ရှင်ရိုက် သီချင်းဆို ၀တ္ထုရေးတဲ့ နမူနာတွေ ပပျောက်သွားမယ် ထင်ရတာပဲ။ လုပ်ချင်တာတစ်ခုကိုပဲ ဇောက်ချပြီး လွပ်လွပ်လပ်လပ် ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် လုပ်နိုင်ခွင့်တွေ ရစေချင်တာပါ။
ဆေးကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်တမ်း သိချင်တတ်ချင်လို့ လာတဲ့သူတွေ သေသေချာချာ အကျိုးရှိ ပညာရတဲ့ နေရာ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ထွက်သွားတာနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ မျှဝေပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားကို တမ်းပြီး ရောက်သွားစေချင်တယ်။ နောက်ထပ် အချိန်တွေ လူအားတွေ မကုန်စေချင်ဘူး။ လူ့ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုကလေးရယ်။
Posted by Nu Thwe | 10/07/2009, 19:14
မှန်တယ်။ မြန်မာပြည်တုန်းကတော့ ဆယ်တန်းပြီးရင် ဆက်လုပ်စရာဆိုလို့ ဆေးကျောင်းတခုပဲရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့မိတယ်၊ အမြင်ကျဉ်းပုံပြောပါတယ်။ ဘေးကလူကြီးမိဘအသိုင်းအဝိုင်းကလဲ ဆေးကျောင်းမမှီတော့ရင်ပဲ အောက်တန်းနောက်တန်းကျတော့မလိုလို တိုက်ရိုက်ရော သွယ်ဝိုက်ရော တွန်းကြတယ်။ မိဘတွေရော ဦးလေးတွေရော သူတို့မိန်းမတွေ ရော အားလုံးကဆရာဝန်တွေဆိုတော့ နဲနဲတော့ခက်တယ်။ ကိုယ်ကတခြားလိုင်းပဲရရင် သိုးမဲစာရင်းအသွင်းခံရပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ စိတ်ပါ ပါတယ်။ လူနာတွေကိုလဲ သိပ်သနားတာပဲ။ အရမ်းလဲကြိုးစား ဖြစ်တယ်။
ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးရင် England လာရမယ်ဆိုတာ မွေးကတဲကရိုက်သင်ပေးထားသလိုပဲ ခေါင်းထဲဆွဲနေတယ်။ (Scotland တောင်ခေါင်းထဲမရှိဘူး။ အခုထိလဲ မသွားဖြစ်သေးဘူး။)အဲဒါလူမှန်းသိတတ်စကတဲကသိတဲ့အသိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။ England ရောက်လာတော့လဲပျော်ပါတယ်။ ဒီကအစာတွေရော လူနေမှူပတ်ဝန်း ကျင်ရော ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တယ်။ ပြသနာက လူနာတွေကို တနေ့တခြား မုန်း လာတာပဲ။ လူတွေက demand များ။ Hospital authorities တွေက demand များ။ တခါတလေ အလုပ်ပင်ပန်းရင်ဒီလူတွေ ဘာလို့ ဒီလောက်လောဘကြီး ပြီး လူ့လောကမှာဆက်နေချင်ရလဲမသိဘူးလို့စိတ်ထဲက ဆဲမိတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ် နှလုံး အစားထိုး ပြီးသားလူတွေက အဆိုးဆုံး။ သူများ ပစ္စည်းနဲ့ အသက်ဆက် လာတာ ဆယ်စုနှစ်ရှိလာတာတောင် ဦးစားပေးခံချင်တုန်းပဲဆိုပြီးလဲ စိတ်ထဲမှာအချဉ်ပေါက်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ သူတို့တွေက ငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေ ထမင်းရှင်တွေဆိုပြီး တော့ ကိုယ့် ကိုကိုကို ဆုံးမရတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ တဖက်ကစဉ်းစားရင် ကိုယ် BMW ကောင်းကောင်းစီးဖို့ Barbados ကို Luxury holiday သွားဖို့ သူတို့မှာ လူနာဖြစ် ကြရတာ။ သူတို့သေတော့လဲ သင်း ချိုင်းလက်မှတ်အတွက် £72 ရသေးတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက ဟိုတုန်းက ဆရာဝန်အလုပ်ကို ခုံမင်ခဲ့ပေမဲ့ work pressure ရယ် အလုပ်က political situation ရယ်ကြောင့် ဒီ profession ကို တဖြေးဖြေးစိတ်ကုန်လာမိတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒီအလုပ်ကလွဲပြီး တခြားလဲမလုပ်တတ်တော့ ဒီသံသယာထဲမှာပဲနေရမှာပါပဲ။ တကယ်တော့လဲ jet pot ပေါက်ရင်တောင်ဆေးတော့ဆက်ကုချင်သေးတယ်။ ဆေးပညာလဲ ဆက်လေ့လာနေဦးမှာပါပဲ။
Posted by steve | 11/07/2009, 06:54
ရှင်တို့ဆရာဝန်တွေ BMW စီးဖို့ ဇိမ်ခံဖို့အတွက် ကျမတို့ လုပ်အားခထဲက အခွန်ပေးပြီး ဆေးကုကြရတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆို responsibilty များလေ pressure များလေပါပဲ။ ကျမလို ကွန်ပျူတာနဲ့ လုပ်ရသူတောင် client ရဲ့ demand များတာခံရသေးရင် လူ့အသက်နဲ့ ရင်းပီး လုပ်ရတဲ့ရှင်တို့မှာ pressure များတာ အဆန်းလား။
ဘယ်သူမဆို ဘယ်သတ္တဝါမဆို နေနိုင်သလောက် နေလို့ရတုန်း အသက်ရှင်ချင်ကြတာချည်းပါ။ ဒါလောဘမဟုတ်ပါဘူး။ ရှင့်မိဘနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာပီး လူနာတွေအတွက် စဉ်းစားစေချင်တယ်။
death certificate ရေးပီး ပိုက်ဆံရတာ သာယာတတ်တဲ့ဆရာဝန် အတန်းအစားထဲ ကျမဆရာဝန်များ ပါနေမလား စဉ်းစားရင်း ကြက်သီးထမိပါရဲ့ရှင်။
ဆေးဆက်ကုချင်ရင် ဆရာဝန်စိတ်ရှိအောင် အရင်ကြိုးစားပါ။ စိတ်ထားတတ်ရင် ကုသိုလ်ရပါတယ်။ မထားတတ်ရင်တော့….
စိတ်ထဲရှိသမျှ ထင်ရာရေးတဲ့လက်ကိုလည်း ချုပ်တည်းနိုင်ပါစေ။
Posted by Su Su | 12/07/2009, 18:45
ဟုတ်တယ်။ နားလည်တယ်။ ဒီကပြောတာလဲ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကို ကြုံတွေ့ရတာ ကို ရိုးရိုးသားသား ပြောပြနေတာပဲ။ ဒီမှာလာမပြောလဲ ကိုယ်ပိုင် websites နဲ့ blogs တွေမှာ ပြောနေကျပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာ အကုန်လုံးက guide line အတိုင်းလျှော့ကုလို့လဲမရဘူး ပိုကုလို့လဲမရဘူး။ ဒီနိုင်ငံ ရဲ့ rules အရ ကိုယ့် ကိုယ့်မိဘကိုလဲပြန်ပြီးဆေးကုခွင့်မရှိဘူး။
သိအောင် ပြောရရင် holidays တွေဆိုတာ အိမ်မှာလာနေကျသန့်ရှင်းရေးမိန်းမကြီးတောင် Caribbean island ကို နှစ်ပတ်တဲ့။ သူ့အစားလွှတ်လိုက်တဲ့ ကောင်းလေးကအချိုးမပြေလို့မေးကြည့်မှသိရတာ။ အားလုံးကလူတွေပဲလေ။ ဘာမှအဆန်းမပါဘူး။
အိမ်မှာလာငှါးနေတဲ့ Nigeria က လူတွေလဲ BMW နဲ့ပါပဲ စုစုရဲ့။
Cremation form ကရတဲ့ ငွေလဲ စုပြီး မြန်မာပြည်က တက်ခဲ့ဘူးတဲ့စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးကိုလှူနေတာပါဘဲ။ ဘာကိုသာယာရမှာလဲ အဲလောက်ငွေလေးနဲ့။
စုစုရဲ့ အခြေအနေတခုခုပိုမြင့်မားလာရင် အမြင်လဲ ပြောင်းလဲလာပါလိမ့် မယ်။ ကိုယ်ဆိုလိုချင်တာသဘောမပေါက်တာ ကိုယ့်ရဲ့စာရေးညံ့မှူကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တော်ပါပီ ဒီကိုလဲပြန်လာစရာမလိုပါဘူး။ ဘာမှအခြေအမြစ်မသိတဲ့လူတယောက်က uneducated manner နဲ့ ရန်တွေ့ခံရမယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူး။
Posted by steve | 12/07/2009, 20:21
ကို စတိ (STEVE) ကလဲ စိတ်ချည်းပဲကိုး။ သူများရန်စတိုင်းသာ စိတ်တိုနေရရင်….
ဒီမှာကတော့ ဆရာဝန်လုပ်ရတာ သက်သာတယ် ဆိုပေမယ့် ကြောက်ရတာ များတယ်။ ဟိုဟာ မပြောရ၊ ဒီဟာ မလုပ်ရ။ လူနာတွေကို ဆေးကုတာထက် လူနာတွေနဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်အောင် အလိုက်အထိုက်နေဖို့က တခါတလေ အရေးကြီးနေတတ်တယ်။ VIP တွေ၊ တိုင်တန်းတတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရင် ကိုယ်ဘယ်လောက်မှန်မှန် ပြဿနာ တက်ရင် ဆမလေး ပြုတ်နိုင်သေးတာကိုး။
P.S Cremation form ဖိုးကလဲ ကျနော့် လစာ ၂လစာပဲ။
Posted by Junior | 13/07/2009, 09:41
ဒီမှာလဲအတူတူပါဘဲ Dr Junior ရယ်။ Patient centred approach လို့ခေါ်ကြတာပေါ့။ (Not disease centred approach nor Physician centred approach) ဘာဘဲလုပ်လုပ်လူနာနဲ့ အရင်တိုင်ပင်ပြီးမှရှေ့တိုး ရတာပေါ့။ ဥပမာ တခြားဆေးတွေမပြောနဲ့ Aspirin စပြီးသောက်ဖို့တောင် သူတို့နဲ့ သေသေချာချာ ဆိုးကျိုးကောင်းကျိုး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ပြီးမှစရတာမဟုတ်လား ။ သူတို့မသောက်ချင်လဲမသောက်ချင်တဲ့အကြောင်းမှတ်တန်းတင်။ စိတ်တိုစရာမလိုဘူးလေ။ မြန်မာပြည်ကတချို့ဆရာဝန်ကြီးတွေလိုဟောက်လို့တော့မရဘူး။ ဟုတ်တယ်ဒီမှာဆက်ဆံရေးမပြေပြစ်လို့ကတော့ရှင်းလို့ကိုပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ လူနာတွေကလဲ သူတို့ရောဂါတွေဆိုတော်တော်များများက internet ကလေ့လားထားပြီးသားမဟုတ်လား.
Posted by steve | 13/07/2009, 11:20
ဆရာဝန်လား? အေးဗျာတော်ကြပါတယ်။ B Ed course တက်တုန်းကများ ဆရာဝန်လောင်းတွေက ဘာမှကို လာမပြောရဘူး။ ကျောင်းမှာ စာသင်တဲ့ နည်းပြတွေကပဲ ကျနော်တို့ ဆရာလောင်းတွေဟာ ဆေးကျောင်းသားတွေလောက် စာအသင်အပြမကောင်းဘူးတဲ့။း-) ဟီး ကောင်းရော။ ဆေးကျောင်းသားတွေ ပြတဲ့ ကျောင်းသားတွေက ဂုဏ်ထူးတွေ တန်းစီပြီးထွက်တာတဲ့။ ကြိုးစားတဲ့ အပိုင်းကလည်း အပြတ်အသတ်ကွာတာပဲတဲ့။ ကျန်တဲ့ လူတွေတော့ မသိဘူး။ အဲဒီတုန်းက တော်တော် မခံချင်ဖြစ်သွားတယ်။ အခွဲခြားခံရတာကိုလေ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှတော့ သူ့ကို ပြန်မပြောပါဘူး။ အများစုအတွက် မှန်နေလို့နေမယ်။း-) တချို့ဆို ဆေးကျောင်းမမီလို့ ဒီကျောင်းလာတက်တာတဲ့ နောင်တတွေရနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေလည်း ရှိတယ်။ အေးဗျာ အသက်မွေးဝန်းကျောင်း တူတူချင်းကို ခွဲခြားချင်ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်က မဟန်ပါဘူးဗျာ။
Posted by Dho-ong Jhaan | 06/09/2009, 16:18
amajunior doctor from MDY and I just got my degree on 3/2009
But you know I didn’t have my grading certificate and only I had is Final medical diploma(MBBS)
They say we need these two things and will verify with any way to approved our educational status ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံဥာဏ်လေးပေးပါ တစ်ခြားသူတွေကော အမှတ်စာရင်းမရှိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလျောက်သလဲ
Posted by heinn | 10/12/2009, 10:06
I see. Could you get transcripts by paying tea money? 🙂 Or some did fake ones with flying colours at Barr Street. 😀
Posted by Tym | 30/12/2009, 00:42
I don’t quite see what exactly you are trying to say? What’s the relevance/significance of tea money and the subject matter in this piece.
Watote (On temporary bloggership as Zizawa’s on leave)
Posted by zizawa | 31/12/2009, 03:57
How lucky I am with flying colors with this —- transcripts? To my mind, this will risk our professions with all our lives to live in international world.Anyhow, thank for suggestion 😀
There will be nothing without effort to shine in life as I think I have to sacrifice myself to meet requirements for exam if there is no last chance to get this transcript in someday like other trying AMC in Warr Street and 28 Street.
Posted by heinn | 31/12/2009, 05:24
Can u get after taking SAMA?
Posted by Tym | 01/01/2010, 05:04
You mean the Refresher course for SAMA ? I don’t think so as I had asked about that to some authorities in our med school. They said onlyacertificate of this course would be issued to an individual doctor but not final medical transcript we desired. That’s all I know.Inapast few years(b4 7/09), this was right that to get SAMA, our school issued these grading certificates only to in-service doctors but nowadays situation was changed.
Posted by heinn | 02/01/2010, 07:15
I think good medical graduates from Burma can easily study
those genetic engineering. I think PCR is not that expensive
and there are even DIY PCR sequencers which one can build.
Also there are microfluidics or lab on chip devices those can
be used for research. See below about PCR. I think there is
nothing one cannot learn, I was inasymposium for biology
and the guy who wrote cell biology book (now he is writing
7th edition) has never received any biology classes and his
undergraduate training and PhD were both in Mathematics.
Below are DIY PCR news. I have seen graduates with Music
education working as telecommunication software engineers
and they even hold some patents. There are guys who have
earned PhD in telecommunication culturing nerve cells in
vitro. So Burmese MBBS graduates can not only pursue MSc
they can even go for PhD as UK PhD programmes are open
for UK honours degree holders to whom MBBS from Yangon
can easily match.
Posted by Aung | 24/10/2010, 07:10